कंगनाका बारेमा चार वर्षपछि ऋतिकले खोले यस्तो रहस्य - Internet Khabar
कंगनाका बारेमा चार वर्षपछि ऋतिकले खोले यस्तो रहस्य
October 7, 2017 Internet Khabar Desk
एजेन्सी । बलिउड अभिनेता ऋतिक रोशन र अभिनेत्री कंगना रनौटबीच लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ।
केही समय ऋतिकसँग प्रेम सम्बन्धमा रहेकी अभिनेत्री कंगनाले ऋतिकमाथि विभिन्न किसिमका आरोप लगाउँदै आएकी छन्। केही दिन पहिले एक टेलिभिजनलाई दिएको अन्तवार्तामा पनि ऋतिक र आदित्य पञ्चोलीमाथि विभिन्न आरोप लगाएकी थिइन्।
उक्त अन्तवार्ता लगत्तै आदित्य कंगनाविरुद्ध मिडियामा आएका थिए तर ऋतिकले उक्त विषयमा चुप बस्न ठिक सम्झिए। तर उनको मौनता पनि धेरै समय टिक्न सकेन्। दुई दिन पहिले उनले सामाजिक सञ्जालमा एउटा चिठ्ठी शेयर गरे। चिठीपछि ऋतिकले आफ्नो मनको दुख पोख्न मिडिया रोजे। एक अन्तवार्तामा उनले कंगनाका बारेमा सबै गोप्य रहस्य खोले।
उनले भनेका छन्, ‘अहिलेसम्म पीडा सहेर मौन बसे, धेरै भयो आफ्नो स्टार इमेज नखल्बलियोस भनेर म चुप बसे। मैले सोचे की म शान्त रहनु पर्छ। तर उसले म माथि नराम्रो दृष्टीकोण राख्न छोडिन।’
कंगना उक्त घटनाको पीडित नभएको पनि उनले दाबी गरेका छन्। बरु कंगनाबाट आफु पीडित भएको उनको दुखेसो छ। ‘मैले आफ्नो जिन्दगीमा कहिलै कुनै मर्दसँग झगड गरेको छैन्। मैले सम्बन्ध विच्छेद गर्दा पनि कोही लडाई लडिन्,’ उने भने ।
‘यदी बाटोमा हिँडिरहेका बेला मलाई कसैले गाली गर्छ भने यो कुरा सहि हुन्छ की म त्यो गाली सुनेर आफ्नो बाटो हिँड्न नछोडु। जबकी उक्त गालीले मेरो जीवनमा केही असर गर्दैन्। तर कसैले म माथि ढंगा प्रहार गर्छ र उक्त ढुंगाले म र मेरो परिवारलाई चोट पर्छ भने म चुप बस्नु मेरो कमजोरी हुन्छ। उनले भनेका छन्। चार वर्षदेखि मलाई गलत साबित गर्दै आएको कुरा सहँदै आए तर अब सहन सक्दिन्।’
शरीरका यी ७ अंगबाट पनि चिन्न सकिन्छ तपाइको वास्तविक पहिचान !
किन हुन्छन् पुरुषमात्र तालुखुइले ? यस्तो छ कारण
नायिका निरुता सिंह भारतीय सिनेमा बनाउने तरखर गर्दै
बंगाली फिल्मको आइटम नृत्यका लागि राखी सावन्त काठमाण्डौँमा
आईएसद्वारा करिब दुई हजार सिरियाली नागरिकको अपहरण
मानव ओसारपसार गरी जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराउने महिला जेल चलान
नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट र समावेशी छ : परराष्ट्रमन्त्री महत
June 12, 2018	 0	खेलकूदमा महिला सहभागिता बढाइने
सम्पादक भट्टराईमाथि दुव्र्यहार र क्यामेरा तोडफोड